निफमा तीन नेपाली फिल्मको प्रतिस्पर्धा- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
वैशाख १, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ २०२१ ) मा यो वर्ष तीन नेपाली फिल्मले नेपाली फिचर फिल्म प्रतिस्पर्धामा भाग लिने भएका छन् । 'लाटोकोसेरो' , 'सरिता ११ वर्ष' र 'आमा खान्डो'ले यो प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन् ।
वैशाख २३ देखि २७ सम्म आयोजना हुने महोत्सवका लागि विश्वका ५२ देशबाट ४ सय ५० फिल्म प्राप्त भएको आयोजकनेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष केपी पाठकले जनाए । आन्तरिक छनोट समितिले दिएको नम्बरको आधारमा उच्च नम्बर पाउने फिल्महरुमध्येबाट ३१ देशका ६३ लाई महोत्सवमा प्रस्तिस्पर्धाको लागि पहिले नै छनोट गरिएको थियो ।
नेपाली प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत फिचर फिल्म छनोट गर्न भने बाँकी थियो । अब निफमा ६६ फिल्म देखाइने भएको छ । प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट भएका तीन नेपाली फिल्मबाट एकले उक्त विधाअन्तर्गत उत्कृष्ट फिल्मतर्फ एक लाख नगद पुरस्कारसहितको ट्रफी, उत्कृष्ट निर्देशक, लेखक, छायांकार, अभिनेता र अभिनेत्रीले पाउनेछन् ।
‘विश्वका कथाहरुको उत्सव’भन्ने नाराका साथ ‘फिल्म संस्कृति’को विकास गर्ने उद्देश्यसहित सुरु हुने महोत्सवमा यो वर्ष महामारीको विषयमा बनेका फिल्मलाई अलग्गै विधामा प्रतिस्पर्धा गराई अवार्ड पनि वितरण गरिनेछ । यो प्रतिस्पर्धा जित्ने फिल्मले ५ सय अमेरिकी डलर तथा ट्रफी प्राप्त गर्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत सर्वोत्कृष्ट फिचर फिल्मलाई १५ सय अमेरिकी डलर राशिसहित गौतम बुद्ध अवार्ड प्रदान गरिने छ ।
यसैगरी, सर्वोत्कृष्ट वृत्तचित्रलाई १ हजार डलर राशिको माउण्ट एभरेस्ट अर्वाड, सर्वोत्कृष्ट एनिमेटेड फिल्मलाई ७५० डलरको मञ्जुश्री अवार्ड, सर्वोत्कृष्ट लघु फिल्मलाई ५ सय डलर राशिको वाग्मती अवार्ड प्रदान गरिनेछ ।
प्रकाशित : वैशाख १, २०७८ १५:२९
भेरी अस्पतालको कोभिड वार्ड भरियो, भर्ना बन्द
वैशाख १, २०७८ ठाकुरसिंह थारु
नेपालगन्ज — भेरी अस्पताल नेपालगन्जको कोभिड वार्ड कोरोना संक्रमितहरुले भरिएको छ । अस्पतालले थप कोरोना संक्रमणका बिरामीहरुलाई भर्ना गर्न नसक्ने जनाएपछि अवस्था जटिल बनेको छ।
भेरी अस्पतालले १४२ बेडको कोभिड वार्ड बनाएको छ । तर जनशक्ति अभावका कारण ६५ बेडमात्रै सञ्चालनमा छ । भेरी अस्पताल नेपालगन्जका प्रमुख डा. प्रकाश थापाले कोरोनाका बिरामी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले सबै बेड भरिएको बताए । उपचारका लागि भर्ना भएका कोरोनाका सबै बिरामीलाई अक्सिजन दिइएको छ । २४ जना आईसीयूमा भर्ना भएका छन् । उनीहरुको अवस्था गम्भीर छ । पछिल्लो समय उपचारका लागि भर्ना भएका कोरोना संक्रमितहरुलाई होम आइलोसनमा राख्न नमिल्ने भएकाले बेड भरिएको अस्पताल प्रमुख डा. थापाले बताए ।
प्रदेश सरकारले भेरी अस्पताललाई चिकित्सकसहित ४२ जना स्वास्थ्यकर्मी पठाएको छ । उक्त जनशक्तिले सबै बिरामीको उपचार सम्भव नरहेको अस्पतालले जनाएको छ । मंगलबार ११३ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ५९ जनामा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको थियो ।
प्रकाशित : वैशाख १, २०७८ १५:१२